Man accidentally kills self playing Russian roulette with dog
လူနဲ့ ခွေးနဲ့ ကံချင်းပြိုင်...ခွေးကိုမနိုင်၊ ရှုံးတဲ့ လူသား....
အိမ်မွေးအချစ်တော်ခွေးတစ်ကောင်နှင့် ပစ္စတိုသေနတ်အတွင်းကျည်တစ်တောင့် ထည့် ကာ ရုရှားကံစမ်း
နည်း ( ဆုံလည်သေနတ်ထဲကျည်တစ်တောင့် ထည့် ကာ မကောင်းသူထိပ်၊ကောင်းသူထိပ် သေနတ်မောင်း
ခလုတ်ဖြုတ်သည့် လက်တည့် စမ်းနည်း ) ဖြင့် ကစားသည့် ကောလိပ်ကျောင်းလမ်းမှ အမျိူးသားတစ်ဦးဟာ
သူ့ ရဲ့ ဦးခေါင်းကိုသေနတ်ဖြင့် ပစ်ခဲ့ မိပါတယ်...
လွန်ခဲ့ သည့် အင်္ဂါနေ့ နှောင်းပိုင်းက ရပ်ဆဲလ်လစ်တဲလ် ကို ၎င်း၏အိမ်နောက်ဖက်ခြံဝန်းထဲတွင် မိမိကိုယ်ကို
သေနတ်ဖြင့် ပြန်ပစ်သည့် ဒါဏ်ရာကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ ရသည်ဟု အောက်မေ့ ဖွယ်ဆေးရုံ ကကြေငြာခဲ့ 
၎င်း၏ဇနီးက ရဲတပ်ဖွဲ့ အားပြောကြားခဲ့ ရာတွင် သူဟာနောက်ဖေးခြံဝန်းထဲမှာ စိတ်ဓါတ်ကျပြီးထိုင်ကာချက်
အရက်များသောက်နေခဲ့ ကြောင်း၊ ၎င်းနောက် ည ၉ နာရီလောက်မှာ သေနတ်တစ်လက်ထုတ်ကာ သူ့ အ
ချစ်တော်ခွေးနှင့် နောက်ပြောင်ကျီးစယ်ပြီး တစ်လှည့် စီမောင်းဖြုတ်ကာ ကစားခဲ့ တယ်လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ကံများဆိုးပြီဟေ့ ဆိုယင် ....ခွေးလောက်တောင်မကောင်းနိုင်တော့ ပြီ....
ခွေးကိုသုံးလေခါလောက် ကျည်မထွက်ပဲသေနတ်မောင်းဖြုတ်ခဲ့ ပြီးနောက်မှာတော့ သူဟာ ပျင်းရိငြီးငွေ့ လာ
တာမို့ သေနတ်ကို သူ့ ခေါင်းကိုပြန်ချိန်ပြီး ခလုတ်ကိုဆွဲညှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ ဇနီးဖြစ်သူကပြောပြ
ကြောင်း ဒက္ခဏလမ်းချိူး ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းမှဗိုလ်ကြီး ဂျင်အင်ဒရူးကဆိုပါတယ်...
ကျည်ဆံဟာ လူနာရဲ့ ညာဖက်နားအနီးမှဝင်ရောက်သွားခဲ့ ပြီး ဘယ်ဖက်ဦးခေါင်းခွံနားမှာ တည်ရှိနေတယ်
လို့ အရေးပေါ်ဆေးဝန်ထမ်းများ ရေဒီယိုစကားပြောစက်ဖြင့် သတင်းပို့ နေခဲ့ သည်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ မှကြားသိခဲ့ 
အရေးပေါ်သူနာတင်ယာဉ် ဆေးရုံသို့ ပို့ ဆောင်နေစဉ်အထိ လစ်တဲလ် တစ်ယောက်အသက်ရှင်နေသေး
ပြီး နောက်ထပ် ၄၅ မိနစ်အကြာမှ သေဆုံးသွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ကံဆိုးချက်ကတော့ ခွေးကိုတောင်မမှီဘူးဆိုတာ ဒီလူမှ အမှန်ပါပဲဗျာ...
A game of Russian roulette withadog ended whenaCollege Street man putabullet in his own head. Russell Little was pronounced dead at Memorial Hospital late on Tuesday following the self-inflicted gunshot wound in the backyard of his home.
"Afteracouple of empty clicks aimed at the dogs head, she said he got tired of that, then put the gun to his own head and pulled the trigger," said Capt. Jim Andrews of the South Bend Police Department.
An emergency medical technician was overheard onapolice radio describing X-rays that showed the bullet entered near the victim's right ear and lodged in the left side of his skull. Little was still alive as an ambulance transported him to hospital, but died asaresult of the gunshot about 45 minutes later.
Posted by peter kyaw | at 10:43 AM |
Labels: news: wsbt.com
Waitress saves suicidal boy withakiss
Dog guards baby forgotten in park overnight by dru...
Is this the world's smelliest man? The farm worker...
Vietnamese man appeals for help to afford operatio...
World’s scariest job? Meet the workers buildinga...
Researcher Creates Artificial Meat Based on Human ...
Magician buried alive for 100 hours
The canine with the cartoon smile
Reservoir to be drained after man urinates in it
Monk beats follower to death
Funny Monkey Teasing Tiger....
သူတို့ ဆီမှာတော့ဖခင်များနေ့ တဲ့ ...
The Man NeedsaRaise
6yr-old swims across Yangtze River
Ouch, ouch, ouch: Vegas performer has 3,200 pierci...
Tale of the tape: At 23.5in, Junrey Balawing takes...
Fukushima Mutant Rabbit ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု၊ နူကလ...
China's shortest man can't pay for extra height
Gaddafi parades injured child as Nato air strike v...
Don't try this at home! 'Superhands' chef takes co...
Killer king rats?
North Korea is one of the 'the happiest places on ...
Bangladeshi woman cuts off alleged assaulter's pen...